Kodzero-dzevanhu, 09 Mbudzi 2019
Mugovera 9 Mbudzi 2019
Mbudzi 09, 2019
Sangano re Zimbabwe Election Support Network, Zesn, rinoti ratumira vaongorori ku Hwedza neku Tsholotsho uko kwange kuine sarudzo dzema by election dzemakanzura emawadhi matatu.
Paita mhirizhonga pamuzinda weMDC pakati pevatsigiri vemutungamiri webato iri VaNelson Chamisa nevatsigiri vevaimbova munyori mukuru mubato iri, VaDouglas Mwonzora.
VaMnangagwa Vanokumikidza Mabhazi Matsva eZupco muBulawayo
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vakumikidza mabhazi matsva ekambani yeZupco muguta reBulawayo vachiti hurumende yavo yakazvipira kurerutsa mafambiro anoita veruzhinji
VaMnangagwa Vanovandudza Zvishoma Dare Ravo reMakurukota
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vakavandudza dare ravo remakurukota nemusi weChishanu vachiwedzera rimwe bazi nekubvisa Amai Prisca Mupfumira avo vari kupomerwa mhosva dzekuita zvehuori.
VaBloomberg Varikufunga Kukwikwidza Musarudzo Vakamirira Democratic Party
Vaimbove meya veguta re New York, VaMichael Bloomberg, vanonzi vari kugadzirira kupindavo mumakwikwi eDomocratic Party kuti vapiwe mukana wekukwikwidzira kuve mutungamiriri wenyika gore rinouya.
Maonero Osiyana Vamwe Vachiti Polad Haina Zvainobatsira, Vamwe Vachiti Yakakosha
Polad yakabuda nechisungo ichi kumusangano wayo wemazuva maviri wakapera neChitatu kuNyanga, apo vatungamiri vemamwe mapato anopikisa vakakwikwidza musarudzo dzegore rapera vari mumubatanidzwa uyu vakazivisa kuti vanoda kuti zvirango izvi zvibviswe vachiti zviri kurwadzisa vana veZimbabwe.
Vanhu Makumi Matatu neVatatu Vourayiwa neMhuka, Uku Nzou Zana neShanu Dzichifawo neNzara
ZIMPARKS inoti vanhu makumi matatu nevatatu vakaurayiwa nemhuka dzemusango gore rino sezvo dzakawanda dzacho dzave kutiza munzvimbo madzinogara nenzara yakonzerwa nekusanaya kwemvura dzichienda kumisha yevanhu.
Huwandu hweVanhu muZimbabwe Hotarisirwa Kudarika Mamiriyoni Makumi Maviri Muna 2032
Gwaro richangobva mukuburitswa nebazi reZimStats rinotaridza kuti huwandu wevanhu munyika huchakwira kusvika pamamiriyoni makumi maviri nerimwe nechidimbu muna 2032 uyewo vanhu vachenge vave kurarama kwenguva yakareba panguya iyi kudarika pari zvino.
Vatendi Vokurudzirwa Kutaura Mhirizhonga Dzinoitika Kwavari Mudzimba Dzavo
Mumwe mudzimai, Amai Grace Chigoche, vakurudzira vedzisvondo kuti vabatsire kuti vanhu vataure zvavanosangana nazvo muhupenyu hwavo zvakanangana nemhirizhonga mudzimba.
Vanhu Vagere paGaths Mine Vodzingwa Mudzimba
Mhuri makumi maviri dzasara dzisina pekugara mushure mukubudiswa pamwe nezvinhu zvadzo mudzimba dzadzanga dzichigara pamugodhi weGaths Mine kuMasvingo.
Rimwe sangano rinomirira varairidzi, re Zimbabwe Teachers Association (ZIMTA) rabatanawo nemamwe masangano evarairidzi pakuzivisa kuti nhengo dzaro hadzichakwanisa kuramba dzichienda kumabasa sezvo dzisisina mari dzekufambisa.